Ngaba ukhuselekileyo ukwakha i-backlink entsha kunye nokudalwa kwendalo kunye nokukhuthazwa?
Ndiyakholelwa ukuba indlela eyona nto ibhetele yokwakha i-backlink entsha ihambelana ngqo newebhusayithi yakho okanye iblogi idala umxholo oyingqayizivele owanikezela ixabiso langempela kubafundi. Ngoko, ukuba nekhwalithi ephezulu kunye nokukhuthaza indlela efanelekileyo kunokwakheka ukuthanda kwakho phakathi kwe-intanethi yoluntu, ukudala ezinye izabelo, ukukhokelela, ukulandela, ukubhaliselwa, kwaye kunjalo, ukwakha i-backlinks entsha. Kwaye umxholo wendalo uhlawula njalo-umxholo obaluleke kakhulu, ungcono amathuba okuba uyanconywa ngumsebenzisi, kwaye udibaniswe emva kwakho konke.
Kodwa indlela ekhuselekileyo yokwakha i-backlink entsha kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi enomxholo oqinileyo kwizihloko ezithile ezifunwayo nezifunwa kakuhle? I-key takeaway ukusuka kulo mbandela kukuba iinjongo ezinkulu zophando ezifana ne-Google ngokwayo zifuna zonke i-backlink ezihambelana nomxholo ukuba zilungiswe ngokuhlelwa ngokuhlelekile. Kuthetha ukuba i-backlink enjalo kufuneka ilawulwe ngokuhlelekile ukusuka kwicala lomthombo wesithathu odibeneyo. Kulula nje, zonke izalathisi zakha ngokuzenzekelayo (okokuthi, ngaphandle kokulawula okwenene ukuhlela) zibi (ngaphandle koko, eziphantsi kwezinga eliphezulu) ukusuka kwimbono ye-injini ye-Google yokusesha. Ewe, le "nkcazo" iyancipha, kodwa ingqiqo. Ngoko, makhe sijamelane nayo - ukwamukela isakhiwo esinxulumene nesiganeko esinokuzenzekelayo, okanye iqhinga elijoliswe ngobuninzi lokufumana i-backlinks ezininzi njengoko kunokwenzeka ngokuqinisekileyo akufanele wenze izinto, ezingenanto enokuyenza ngokukhusela kwakho kwiintlawulo zeGoogle.
Ngoko ke, xa kuziwa ngendlela evumelekileyo kunye ekhuselekileyo yokwakha i-backlinks entsha kunye nomxholo phantsi kolawulo lokuhlela, nakhu iindlela eziphambili zokudalwa kwendalo kunye nokukhuthazwa ukuba kusetyenziswe iwebhusayithi yakho okanye iblogi. Ndiza kudlula ukhetho olucacileyo lokuhlela (njengoludliwano-ndlebe, i-infographics, i-link baits, njl.) Ukukubonisa ezinye iindlela zokwakha i-backlink entsha kunye nomxholo. Bayafuna ukucaciswa okufutshane malunga nokobangela ukuba babonakale bekhuselekileyo emehlweni e-Google. Ngoko, masiqhube ngokukhawuleza.
Iibhulogi zeeNdwendwe - okokuqala, indawo yokuxhuma okanye iblogi inokhetho lokuvuma okanye ukungaqwalasela lakho igalelo kuwo onke . Kwaye, kunjalo, kufuneka kubekho ulawulo lokuhlela ngokulandelelanisa kuzo zonke i-backlink ezintsha kwiimibhalo ezipapashwe kutshanje okanye iiblogi zithuba.
Ukuhanjiswa kweeNgxelo - ukuthumela kwiirekhodi eziphonononga zonke iziphakamiso ziya kukhuseleka xa zigcina ukulawulwa komhleli (ngaphandle koko, nje ngokuba zilahla zonke iisayithi kunye neeblogi zezinga eliphantsi).
Ukukhutshwa kweeNkcukacha kunye neNdawo zoLwazi - ukujongana nabo kulungile ukuba zikhuphe iziqulatho eziphindaphindiweyo kuphela zamabali afanelekileyo kwaye akukho nto enye. Khawukhumbule, olu hlobo lwewebhusayithi zeendaba zenzelwe ukuhanjiswa, kungekhona kwikhonkco yokuqala.
Ibhulogi yamazwana -kuqwalasela ukuba ukhetho lokuhlela luhlala luye ngqo kwi-blogger, inani elikhethiweyo kuphela leeblogs ezithembekileyo liza kukhuseleka ngokwaneleyo ukwakha i-backlinks entsha kunye nolwazi olunzulu nolunzulu izimvo.
IiForam ezidibeneyo, i-Niche Community, kunye neeSayithi zeMbuzo - ziya kuba ziindawo ezikhuselekanga zokuzakhela isiqulatho kunye nokudalwa kwendalo kunye nokukhuthazwa. Kungenxa yokuba naluphi na ugaxekile oluya kucinywa ngabaomodareyitha kwisaziso esifutshane okanye ngaphantsi kwezithili zasekuhlaleni kungekudala Source .